Archive de l'auteur | NewsMada | Page 824
Nomen’ny Vivo Energy : nahazo fitaovam-panazavana ireo traboina
Par Taratra sur 08/10/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Ho fanampiana ireo fianakaviana traboina vokatry haintrano teny Ankasina farany teo, nizara jiro mandeha amin’ny herin’ny masoandro ho azy ireo ny Vivo Energy Madagascar ny alakamisy lasa teo. Tanjona ny hampihena ny haintrano amin’ny fampiasana hazavana madio tsy mitera-doza. Fianakaviana 130 nahazo ny fitaovam-panazavana ilaina amin’ny fiainana andavanandro ary mandeha amin’ny herin’ny masoandro avy amin’ny […]
Tsy salama : nalefa notsaboina any Maorisy ny minisitra
Lasa nitsabo tena atsy amin’ny Nosy Maorisy indray ny minisitry ny Filaminam-bahoaka, i Anandra Norbert. Hatreto aloha tsy fantatra marina izay soritr’aretina nahazo azy fa araka ny loharanom-baovao voaray avy amin’ireo olona akaiky azy, misy ifandraisany amin’ny aretina nahazo azy teo aloha izao ka tsy vita eto an-toerana intsony ny fitsaboana. Fanindroany amin’izao ity minisitra […]
Nanao hosoka taratasina fitsarana fiarakodia : lehilahy roa voasambotry ny zandary
Saron’ny zandary ireo lehilahy roa tompon’antoka tamin’ny fanaovana hosoka taratasina fitsarana fiarakodia. Efa migadra any am-ponja ny iray amin’izy ireo… Nitondra ny fiara iray vao novidiny hotsaraina ny vehivavy iray, ny 19 septambra 2016 lasa teo. Tsikaritry ny tompon’andraikitra raha vantany vao nampidirina tanaty solosaina ny laharan’ny fiara, fa hosoka ny soratra rehetra momba […]
Ankadinondry Sakay : miaramila kaporaly tratra nanafika niaraka tamin’ny basy Kalach
Par Taratra sur 08/10/2016 Divers, NS Malagasy
Saron’ny zandary avy ao amin’ny borigadin’Ankadinondry Sakay ireo jiolahy telo tompon’antoka tamin’ny fanafihana toeram-pivarotana iray ao Mahatsinjo Ankadinondry Sakay, ny talata alina teo. Miaramila kaporaly miasa amin’ny tobi-miaramila iray eto an-drenivohitra ny iray amin’ireo jiolahy, araka ny fampitam-baovao avy amin’ny loharanom-baovao iray. Voalaza kosa anefa fa miaramila Das ao Ankoririka Kiranomena Fenoarivobe izy no nivadika […]
Baomba tetsy Mahamasina : hiatrika fandidiana fanintelo Anicet R.
Hiatrika fandidiana fanitelony Razafimahatratra Anicet, iray tamin’ireo olona naratra vokatry ny fipoahana nitranga tetsy Mahamasina, ny 26 jona lasa teo. Misy fahapotehana eo amin’ny lohany, ka tsy maintsy asina « prothèse », araka ny fanazavan’ny reniny, afakomaly. Mbola manaraka fitsaboana eny amin’ny HJRA izy hatramin’izao ary tsy maintsy hodidina. Nangataka fanampiana tamin’ny vadin’ny filoha ny fianakaviana, ka nahazo […]
Fitsaram-bahoaka tany Andramasina : olona maromaro nataon’ny zandary fanadihadiana
Fitsaram-bahoaka nahazo ireo mpiasan’ny hetra roa lahy, hoy ny zandary mahakasika ny zava-nitranga tany amin’ny kaominina Alarobia Vatosolas Andramasina, ny alarobia tolakandro teo, tokony ho tamin’ny 2 ora. Misokatra kosa anefa ny fanadihadiana momba izany satria naratra mafy, ary efa saika ratsy ny nahazo ny iray tamin’ireo mpiasan’ny hetra niharan’ny daroka, izay mbola manaraka fitsaboana […]
Amisavisana ny ratsy, hiavian’ny ratsy tokoa…
Par Taratra sur 08/10/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Ny amisavisana ny ratsy, hiavian’ny soa. Mbola marina izany amin’izao toe-draharaha izao? Ny amisavisana ratsy, hiavian’ny ratsy tokoa. Tsy fanirian-dratsy, fa lojikan-javatra. Mivaly ny atao? Na ny fihetsika sy ny fomba fiasa noho ny fampandriana adrisa, fanaovana bemarenina, fanamarinan-tena… Tsy nampiraika ny rovitra fony mbola omby tondro, omby loha vao hikoropahana? Noho ny fahatokisan-tena na […]
Jery taratra.. herinandro : tsy ifankahitana ny raharaha
Feno mpitandro filaminana ireo faritra saro-padin’ny Renivohitra. Fanahiana fanonganam-panjakana. Namory ireo lehiben’ny mpitandro filaminana ny filoham-pirenena. Nandrasana ny baiko, ka resaka no be. Tsy ifankahitana ny amin’ny fidiran’ny mpianatry ny sekolim-panjakana. Mandeha ny fitokonan’ny sendikàn’ny mpampianatra mitaky ny fanondrotana tambin-karama. Hanao ahoana? Tsy raikitra ny fanondrotan’ny mpitatitra saran-dalan’ny taxi-be, Antananarivo Renivohitra. Ho 500 Ar. Vola […]
Hitokona manomboka amin’ny alatsinainy… : hampikatso ny fitsarana ny mpirakidraharaha
Par Taratra sur 08/10/2016 Faits Divers, La Une, NS Malagasy
Tapa-kevitra tanteraka rehefa tsy nohenoina. Hiroso amin’ny fitokonam-be ny mpirakidraharaha fitsarana manerana ny Nosy, manomboka amin’ny alatsinainy izao. « Tapitra ny fe-potoana nomena ny fanjakana. Tsy nivaly ny fametrahana ny sampan-draharaha manokana ho anay na efa voasonia aza. Eo koa ny vola tokony ho azonay amin’ny fiakarana grady… Tsy hisy na ny asa farafahakeliny aza […]
Kitra : nosoloina vazaha ny mpanazatra ny Barea Academy
Par Taratra sur 07/10/2016 NS Malagasy, NS-Sports
Ho fanomanana tsara ny Barea Academy, nanapa-kevitra ny federasiona malagasin’ny baolina kitra (FMF) fa soloina ny mpanazatra. Nesorina, Lemarc ary nomena vazaha ny toerany. Noho ny tsy fahombiazana tamin’ny “Cosafa cup”, farany teo, nosoloin’ny federasiona (FMF), an’ilay Frantsay, i Fleury Roger, ny mpanazatra ny Barea Academy. Rahampitso asabotsy izy no ho tonga eto Madagasikara. Teratany […]
Tenisy : tafita ny Malagasy
Par Taratra sur 07/10/2016 Divers, NS Malagasy
Hiatrika lalao manasa-dalana enina, ny Malagasy anio, eo amin’ny “tournoi ITF-Cat”, taranja tenisy, sokajy zandriny, taorian’ny fahavitan’ny ampahefa-dalana, omaly. Anisan’ireo tafakatra amin’izany, ho an’ny sokajy U12 vehivavy, i Safidisoa Nomenjanahary rehefa nanilika ilay Maorisianina, i Chiara Li Yaw Hay, tamin’ny seta 2 noho 0 (6/1 ; 6/1). Toy ny nanaovan’i Safidy fanazarantena fotsiny ity mpifanandrina aminy […]
Sekoly katolika : tsoan-kevitra ho an’ny fiahiana ara-tsosialy
Par Taratra sur 07/10/2016 Economie, NS Malagasy
Natao tany Taolagnaro, ny 3-6 oktobra teo ny fiofanana mikasika ny fiahiana ara-tsosialy eny amin’ny sekoly katolika. Fiofanana faha-19 teny amin’ny fari-piadidiam-pampianarana sekoly katolika (Dinec) ity natao ity, raha natomboka tany Antsirabe. Nambaran’ny tale nasionalin’ny Dinec, R.P. Ranaivoson Jules, fa manana ny soatoviny ny sekoly katolika, fandrefesana ny fandrosoana eo amin’ny fiarahamonina ny fiahiana ara-tsosialy. […]
“Salon Sitis” : hetsika ho an’ny sary sy feo
Hotanterahina, ny 25 novambra hatramin’ny 27 novambra ho avy izao etsy amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena sy ny kolontsaina ny « Salon de l’industrie et de la technologie de l’image et du son » (Sitis). Andiany voalohany ity hetsika ity, hanomezan-danja ny sehatry ny sary sy ny feo amin’ny lafiny fifandraisan-davitra sy ny fampahalalam-baovao. Mifanojo rahateo amin’ny fivoaran’ny Teknolojian’ny […]
LTCA Ambatondrazaka : mpianatra 92 nahazo fiofanana
Par Taratra sur 07/10/2016 NS Malagasy, NS-Culture
Linking Countries Training Action (LTCA Private School) Ambatondrazana, sekoly manaraka ny fomba fampianarana amerikanina. Anisan’ireny ny fampidirana sy fanomezan-danja ny kolontsaina eo anivon’ny fanabeazana. Ho fampiharana izay, nahatratra 92 ireo mpianatra ao amin’ity sekoly ity nahazo fiofanana momba ny fitendrena valiha miaraka amin’ny solfezy, ny 26 septambra ka hatramin’ny 1 oktobra teo. Fomba fanabeazana fahita […]
Fankalazana ny faha-20 taona : handray ny tarika ‘Zay Antsirabe
Fahombiazana ny fanokafana ny fankalazana, tao amin’ny Carton Anosy. Araka ny fandaharam-potoana efa nampahafantarina mialoha, hitohy any Antsirabe ny fanamarihana ny faha-20 taon’ny tarika ‘Zay amin’ity. Seho roa no nomanina, ka hotontosaina anio, manomboka amin’ny 8 ora sy 20 minitra ny voalohany, ao amin’ny Hôtel des Thermes. Seho ankalamanjana, araka ny fangatahan’ireo mpankafy marobe kosa […]
Tantara amin’ny onjampeo : lasan’i Lovasoa ny voalohany
Nahazo ny laharana voalohany tamin’ny fifaninanana tantara amin’ny onjam-peo i Lovasoa. Nikarakara izany ny fikambanana Fantaro, tarihin’ny mpanoratra sady mpilalao, Anona. 19 ireo tafakatra teo amin’ny manasa-dalana ka ny 11 amin’izy ireo no nahazo naoty ambony. Nisongadina teo amin’ny feo sy ny fahafehezana ny anjara toerany ao anatin’ny tantara Randrianarivelo Lovasoa Nantenaina. « Tena faly aho […]
« Madacircus Show » : nahaliana ny seho rehetra
Nahasarika mpijery maro ilay seho « Madacircus Show », notontosaina tao amin’ny lapan’ny Kolontsaina sy ny Fanatanjahantena Mahamasina ny alarobia 5 oktobra teo. Samy nahaliana avokoa ny seho teny an-tsehatra. Niainga tamin’ny fanentanana nataon’i Goth, nandalo ireo karazana vikina sy ny fahaizana mifehy afo niaraka tamin’ny Aléas des Possibles. Fahitana an’i Tatiana Thomas « misidina toy ny anjely » […]
Is’Art Galerie : haneho vokatra vaovao i Jimmy B’Zaotö
Ny jazz no malaza eto amin’ny « tanàna », tato anatin’ny andro vitsivitsy izay. Ankoatra ireo fampisehoana sy hetsika samihafa manodidina izay, tsy mifanalavitra loatra amin’ity tontolona mozika ity ny hitranga etsy amin’ny Is’Art galerie, etsy amin’ny La Teinturerie Ampasanimalo, anio hariva. Hanafana ity toerana ity, i Jimmy B’Zaotö, nilomano an-taona maro tao anatin’ny fivelesana ampongamaroanaka, saingy […]
Haody : tantara voarara !
Tsy mba voankazo fa tantara voarara tsy ho fantatry ny tompony. Ezahina fafana tsy ho hita soritra eto amin’ity tany ity ny tantaran’ny Malagasy sy i Madagasikara. Ankolaka, mivantana, izay fomba rehetra ahafahana manao izany, atao avokoa. « Izay tsy mahalala ny tantarany, very fototra. Izay very fototra, mora rebirebena », hoy ny filazan’ny manam-pahaizana momba ny […]
Vondrona eoropeanina : “Mba hanamafy orina ny demokrasia ny fifidianana 2018”
Fifidianana demokratika, mangarahara, eken’ny rehetra: hanamafy orina ny demokrasia eto Madagasikara. Izay no irin’ny rehetra amin’ny fifidianana, taona 2018, raha ny nambaran’ny ny tale jeneraly ho an’ny Afrika eo anivon’ny sampandraharaha eoropeanina ho amin’ny asa ivelany (SEAE), Koen Vervaeke, teny Iavaloha, afakomaly, nihaonany tamin’ny filoha Rajaonarimampianina. Fanintelo izao no nahatongavany eto Madagasikara izao, ny 28 […]
Rakotoniaina Pety : “Mandrovi-tsihy ny mpitondra mahalala fa tsy tiam-bahoaka”
Par Taratra sur 07/10/2016 NS Malagasy, NS-Politique
Mbola misy fanantenana ihany ny amin’izay ataon’izao fitondrana izao? Mahalala fa tsy tiam-bahoaka ka mandrovi-tsihy, raha ny fahitan’ny eo anivon’ny MMF, Rakotoniana Pety. “Ny tena loza, fantatry ny mpitondra ny tsy fitiavantsika sy ny tsy fankasitrahantsika azy: vao mainka mandrovi-tsihy izy.” Io ny fahitan’ny eo anivon’ny Malagasy mivondrona ho amin’ny fanorenana ifotony (MMF), Rakotoniana […]
Governemanta : itakiana fahombiazana ny minisitra
“Raha vao nandray toerana aho, tsy maintsy hasiana fifanarahana eo amin’ny Praiminisitra sy ny mpikamban’ny governemanta tsirairay avy. Tsy tokony hatao tompon-trano mihono ny vahoaka malagasy eo amin’ny asan’ny governemanta.” Io no nambaran’ny Praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier, teny Mahazoarivo, afakomaly, ny amin’ny asan’ny governemanta tarihiny. Matoa misy ny mpikamban’ny governemanta, natao hanatanteraka ny politikam-panjakana sy […]
« Précédent 1 … 822 823 824 825 826 … 1 062 Suivant »